शरीरको कुन अंग फरफराउँदा के हुन्छ ? - ज्ञानविज्ञान
१) यदि महिलाको दायाँ आँखा फर्फराएमा शुभ समाचार सुन्न पाइन्छ भने पुरुषहरुको बायाँ आँखा फर्फराउनु राम्रो मानिन्छ । महिलाको बायाँ आँखा फर्फराउनुको अर्थ उनको परिवारमा कुनै सदस्य बिरामी हुनु हो ।
Don't Miss it घामको बिकिरणको खतरा र बच्ने तरिका
कसरी जन्माउने नयाँ आइडिया ? सहयाेगी टिप्स
सफल व्यवसायी ज्याक माकाे एउटा भनाइ छ, “नक्कल गर्याै भने तिमी हराउछाै”। नहराउनकाे लागी अाफैले नयाँ अाइडिया जन्माउन सक्नुपर्छ ।…